सुहागरातमा श्रीमती हातमा दुध लिएर कोठमा छिरेकी मात्र थिइन्, पतिको यस्तो हर्कत देखेर चकित परिन ! – Namaste Host News
September 8, 2019 adminLeaveaComment on सुहागरातमा श्रीमती हातमा दुध लिएर कोठमा छिरेकी मात्र थिइन्, पतिको यस्तो हर्कत देखेर चकित परिन !
त्यो मेरो बिहेको रात थियो। पहिलो पटक म एउटा पुरूषसँग नजिक हुँदै थिएँ। मेरा एकदमै मिल्ने साथीहरूसँग गरेका कुराकानी सम्झिँदै मेरो दिमागमा सपना र चाहनाका अनेकौँ तस्वीरहरु घुमिरहेका थिए। म हातमा एक गिलास दूध लिइ टाउको निहुराएर कोठामा प्रवेश गरेँ। त्यो पूरै परम्परागत शैलीमा थियो जस्तो मैले कल्पना गरेकी थिएँ। तर मैलै सोचेकै थिइनँ एउटा कहालीलाग्दो आश्चर्य मलाई पर्खिरहेको थियो। वास्तवमै एउटा भयङ्कर निराशाजनक। कल्पनामा म कोठा छिर्दा मेरा पतिले मलाई दह्रोसँग अंगालो मारून् भन्ने चाहन्थेँ, निस्सासिने गरी चुम्बनहरू गरून् भन्ने सोच्थेँ र रातभर मलाई माया गरून् भन्ने चाहन्थेँ। तर वास्तविकतामा म कोठामा पुग्दा उनी निदाइसकेका थिए।
म ३५ वर्षकी थिएँ र मसँग शारीरिक सम्पर्क गरेको अनुभव थिएन। त्यो अस्वीकार्यता एकदमै पीडादायी थियो। कलेजको बेला र काम गर्दा मैले धेरै केटा र केटीहरू सम्झनलायक गहिरो मित्रतामा परेको देखेँ। उनीहरू एकअर्काको काँधमा टाउको राखेर बस्थे, एकअर्काको हात समाएर हिँड्थे र मैले डाह गर्थेँ। के मलाई पनि जिन्दगीमा त्यस्तो साथीको चाहना थिएन ? मेरो ठूलो परिवारमा चारजना दाजुभाइ, एक बहिनी र वृद्ध भइसकेका अभिभावक थिए। तर पनि मैले सधैँ एक्लो महसुस गर्थेँ। मेरा दाजुबहिनीको बिहे भइसकेको थियो र उनीहरूको आफ्नै परिवार थियो। बेला–बेला मैले सोच्थेँ मेरो उमेर बढ्दै गएको र म एक्लो भएकोबारे उनीहरू के नै चासो राख्थे र ?
मेरो मुटु प्रेम र चाहनाका लागि जलिरहन्थ्यो। तर म एक्लोपनले घेरिएकी थिएँ। बेला–बेला मलाई लाग्थ्यो कि म मोटी भएकीले यस्तो भएको हो। के पुरूषहरू मोटी महिलालाई घृणा गर्छन् ? के मेरो तौल नै मैले विवाहका लागि उपयुक्त केटा नपाउनुको कारण हो ? के म साँच्चै नै जीवनभर एक्लै रहनुपर्छ ? के म सधैँ कुमारी नै रहन्छु ? यस्ता प्रश्नहरू हरबखत मेरो दिमागमा खेलिरहन्थे। अन्ततः जब म ३५ वर्षकी भएँ। कसैगरी ४० को दशकका एक पुरूष विवाह गर्न आए। हाम्रो कुरा छिन्ने बेलामा मैले मेरा भावना उनीसँग व्यक्त गरे। तर उनले न ध्यान दिए न त जवाफ। उनी अत्तालिएको जस्तो लाग्यो। भुइँतिर निहुरिएर उनी चुपचाप बसिरहे, टाउको पनि खासै माथि उठाएनन्।
उनले के पनि भने भन्दा मैलै उनको ध्यान तान्नुपर्छ र त्यसो गरेर उनको नजिक हुनुपर्छ। मैले निकै आँट गरेँ । मेलै कल्पना गरेकी थिएँ कि मेरो स्पर्शले परिणाम दिनेछ तर म निराश भएँ। मलाई थाहा थिएन र यसबारे कसलाई सोध्ने ? मलाई एकदमै लाज लाग्यो। त्यसले मलाई सतायो। जसरी महिलाको सुन्दरताबारे पुरूषहरू धारणा बनाउँछन्, मैले मेरा पतिको शरीर हेरेर धारणा बनाउन किन मिल्दैन ? मैले पतिबाट अपेक्षा गर्नु गलत थियो र ? त्यसपछि मलाई थाहा भयो कि उनी नपुंसक थिए र हाम्रो बिहेभन्दा पहिले डाक्टरले उनी नपुंसक भएको पुष्टि गरिसकेका थिए।
मलाई मेरा आफन्तले सुझाए, यौ न मात्रै जिन्दगीका लागि महत्त्वपूर्ण होइन। तिमीले धर्म सन्तान किन बनाउँदैनौँ ? मेरा पतिका परिवारले याचना गर्‍यो, मानिसहरूलाई वास्तविकता थाहा भयो भने त्यो हाम्रो लागि ठूलो लज्जाको विषय हुनेछ। मेरो माइती पक्षले मलाई स्मरण गरायो, यो तिम्रो नियति हो।
म त्यस्तो व्यक्तिका लागि प्रतीक्षरत छु। त्यस्तो व्यक्ति नभेटुञ्जेल मैले आफ्ना साथीहरूको यौ नजीवनबारे गोप्यरूपमा कुराकानी गरेर आफूलाई सन्तुष्ट पारिरहेकी छु। मैले जे गरेकी छु त्यसका लागि मबारे धारणा बनाउने मानिसहरूको कुनै कमी छैन। मलाई विश्वास छ ती मानिसहरूले बुझ्नेछन् कि महिलाहरू निर्जीव होइनन्, उनीहरूका पनि अनेकौँ भावना हुन्छन्।
जंगलमा भेटियो दुई टाउको ४ आँखा भएको सर्प, देख्नेबित्तिकै होस उडेपछि…
भाईरल भएकी कमला घिमिरेलाई एक्कासी के भयो ? गीत गाउन नसकेर रुन लागिन् (भिडियो)
भेटीए अच्चमका जोडी ६४ बर्षका हजुरबुवाले २२ बर्ष की ठिटी लाई गर्नु भयो बिहे यसरी बित्छ उहाको जीबन
श्रीमती र छोरासँग रमाउँदै आर्यन…( फोटो फिचर )
हजारौं युद्ध जित्नुभन्दा ठूलो आफैंलाई चिन्नु हो